Votoaty misimisy kokoa, olana maro kokoa: Ny tolon'ny Repoblika fivarotana | Martech Zone
Votoatiny bebe kokoa, olana maro hafa: Ny tolona ataon'ny solo-mpivarotra
Talata, Jona 17, 2014 Douglas Karr
Efa namoaka kely momba ny fitaovana mampifanaraka ny ezaky ny varotra sy ny varotra izahay. Raha ny fahitako azy dia manana asa sarotra lavitra kokoa ny solontenan'ny varotra ankehitriny. 59% amin'ny fotoanany manao asa hafa ankoatry ny fivarotana toa ny fikarohana ny kaonty sy ny famoronana fitarihana. Ary ny mpanjifa sy ny orinasa dia afaka manao fikarohana miavaka amin'ny Internet, manombatombana ny endrika, tombony, vokatra, serivisy, naoty ary hevitra.
Na eo aza ny habetsaky ny fitaovana marketing misy, 40% ny fitaovam-barotra dia tsy ampiasain'ny ekipa mpivarotra. Ao amin'ireo orinasa tsy maharaka, ny solontenan'ny varotra dia navela nibaiko ny mpaka entana nefa tsy nanararaotra nanao fandraisana anjara lehibe. Ao amin'ny orinasa mialoha ny fiolahana, ny solontenan'ny mpivarotra dia mitam-piadiana feno amin'ny atiny rehetra ilain'izy ireo mba hahitana ny tanjon'ny fanantenana, hanangana fahefana sy hatoky azy ireo, ary hitarika azy ireo amin'ny fanoherana ao anatin'ny dingana fandraisana fanapahan-kevitra.
izany infographic avy any Qvidian mandeha mandritra ny iray andro amin'ny fiainan'ny mpivarotra B2B maoderina, manasongadina ireo fanamby miseho eny an-dàlana. Fantatry ny mpivarotrao rahoviana sy ny fomba fampiasana ny atiny, fitaovana ary fiofanana nomenao azy ireo mba ho mpanolo-tsaina atokisana antenain'ny mpividy?
8 amin'ny repoblika mpivarotra 10 no mahatsapa tototry ny habetsaky ny fampahalalana tsy maintsy mandinika izy ireo, ka mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fandaminana sy ny famakafakana ny zava-misy. Ny fahaizana mamaly sy mamaly ny filan'ny vinavina dia zava-dehibe kokoa noho ny taloha… ary ny marketing dia mila fampandehanana ny varotra amin'ny orinasa mba hahafahan'ny solontenan'ny mpivarotra manome ny atiny mety tsara amin'ny fandefasan-kafatra tonga lafatra raha ilaina izany na takiana.
Tags: manadihady izay ilainaakaikyhanarakafampahalalam-baovaoresadresakataratrafmfampifanarahana amin'ny varotra sy ny varotrahifampiraharahafifampiraharahanaankehitrinyfanantenanaqvidianatiny fivarotanafahombiazan'ny varotraFanamafisana ny varotrampivarotrampivarotraService
Ahoana ny fomba hanaovana asa automatique marketing ho anao
iOS sy Android App Icon Photoshop